अजयसंग नभएको भए के शाहरुखसंग विवाह गर्थिन काजोलले ? यो प्रश्नमा काजोलले दिइन् यस्तो जवाफ – Kavrepati
Home / समाचार / अजयसंग नभएको भए के शाहरुखसंग विवाह गर्थिन काजोलले ? यो प्रश्नमा काजोलले दिइन् यस्तो जवाफ
admin June 21, 2021	समाचार Leaveacomment 282 Views
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री काजोल र अभिनेता शाहरुख खानको जोडी निकै हिट जोडी हो । दर्शकहरूले वास्तविक जीवनमा पनि एक अर्कामा हुनुपर्दछ भन्ने महसुसगरेका थिए । दर्शकले जोडी बनोस् भनेर चाहेको अन्य कलाकारहरुमा दिलीप-मधुबाला, अमिताभ-रेखा, अनिल-माधुरीको नाम सामेल छ।
यी ताराहरूको जोडी पर्दामा यस्तो चमक्यो कि उनीहरूको फिल्महरू हिट हुन्थे। वास्तविक जीवनमा पनि, प्रशंसकहरू उनीहरू एक भएको हेर्न चाहन्थे। यसमा एक जोडी पनि छ जसले वर्षौं र बर्षसम्म दर्शकहरूको हृदयहरूमा शासन गर्यो र आज पनि ती दुबै पर्दामा सँगै आउँदा दर्शकहरूको हृदयमा खुसी आउँछ । यो जोडी शाहरुख र काजोल पनि एक हो ।
के अजयको विकल्पमा काजोलका लागि शाहरुख खान थिए ?
शाहरुख र काजोलले ‘करण-अर्जुन’ ‘बाजीगर’, ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’, ‘कुछ कुछ होता है’, ‘कभी खुशी कभी गम’ र ‘दिलवाले’ जस्ता धेरै फिल्महरूमा काम गरिसकेका छन्। फ्यानहरू दुबैको केमिस्ट्री यति मनपर्दछ कि प्रशंसकहरूले उनीहरूलाई वास्तविक जीवनमा पनि सँगै हेर्न चाहन्थे। यद्यपि शाहरुखले गौरीसँग विवाह गरेका छन् र काजोलले अजय देवगनलाई उनको पतिको रूपमा छानिन् । त्यहि समयमा एक फ्यानले काजोललाई एकपटक सोधे कि यदि अजय उनका पति नभए के उनले शाहरुखसँग बिहे गर्ने थिइन् ?
वास्तवमा काजोलले इन्स्टाग्राममा एउटा स्टोरी राखेकी थिइन् । जसमा एक फ्यानले उनलाई सोधे कि तपाईलाई अजय नमिलेको भए शाहरुखसँग बिहे हुन्थ्यो ? यसको जवाफमा, काजोलले एकदम चाखलाग्दो कुरा लेखेकी छन् । काजोल भन्छिन्, त्यसका लागि शाहरुखले प्रपोज गर्नु पर्दैन ? अब काजोलको यस्तो जवाफमा फ्यानहरूले धेरै प्रतिक्रिया दिएका थिए।
काजोल एकदम हास्यास्पद छन र प्रायः उनी यस्ता प्रश्नहरूको धेरै हास्यास्पद जवाफ दिन्छिन्। धेरै अवसरहरूमा उनलाई शाहरुखको बारेमा त्यस्तै प्रश्नहरू सोधिएको थियो, जसको उत्तरमा उनले सधैं भनेका थिए कि शाहरुख उसको सबैभन्दा मिल्ने साथी हुन् र उनी मात्र एक हुन् जसको उनले गाला तान्न सक्छिन् ।
Previous दीपक मनाङेले मागे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, भन्छन् फेरी पनि एमालेसंगै मिलेर चुनावमा जान्छु नत्र राजनीति नै गर्दिन